Dr. Tint Swe's Writings: June 2020
HIV အတွက် ART ဆေးကို တချို့နေရာတွေမှာ အခမဲ့ပေးပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ကတည်းက HIV ဆေးတွေကို ပြိုင်ဆိုင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့တယ်။ ကင့်ပန်းလုပ်သူတွေကနေ အစိုးရနဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေအပေါ် ဆေးနာမည်ရင်းအတိုင်း ထုတ်ဖို့နဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာဖို့ရာ ဖိအားတွေပေးနေကြတယ်။ အဲဒီကျေးဇူးနဲ့ အခုနေအခါ မချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေက လူနာတွေပါ လက်လှမ်းမီလာကြပါတယ်။ လူနာပေါင်း ၈ သန်းလောက်က ART ဆေးလိုနေကြတယ်။
တိုးတက်မှု သိသိသာသာရှိလာတာမှန်ပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေကများနေဆဲဖြစ်တယ်။ ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ဆေးကို ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပဲ လက်လှမ်းမီနေတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ HAART ခေါ်တာကိုသုံးခဲ့တယ်။ AIDS ဖြစ်လာမှာကို နှေးစေတယ်။ အဲတာကို ချမ်းသာတဲ့နေရာတွေမှာသာရနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက် ၄ နှစ်နေတော့ အဲဒီနေရာတွေမှာ ၈၄% ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။ လူတယောက်စာ ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝဝ ကနေ ၁၅ဝဝဝ ကုန်ကျတယ်။ HAART ပေါ်ပြီးနောက် ၅ နှစ်နေတော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တွေရဲ့ ၂% မှာဆေးရလာတယ်။
၂ဝဝ၁ မှာ အိန္ဒိယဆေးကုမဏီ Cipla ကနေ ဈေးချိုတာကို ဒေါ်လာ ၃၅ဝ နဲ့ ထုတ်ပေးနိုင်လာပါတယ်။ ဈေးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ Clinton Foundation ကလင်တန်ဖေါင်ဒေးရှင်းနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်တချို့က အစိုးရတွေကနေ လုံးပမ်းကြတယ်။ ၂ဝဝ၁ နှစ်လည်မှာ အိန္ဒိယကနေ ဆေးသုံးမျိုးတွဲကို လူတယောက်စာ တနှစ်တွက် ဒေါ်လာ ၂၉၅ နဲ့ ထုတ်ပေးလာနိုင်တယ်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ AIDS Medicines and Diagnostics Service (AMDS) ကနေ Global Price Reporting
Mechanism (GPRM) ဆေးဈေးအစီရင်ခံခြင်းစနစ်ကို စလုပ်လာနိုင်တယ်။
HIV အတွက် ART ဆေးဈေးတွေ ကျလာပါတယ်။
WHO recommended defined daily dose (DDD) 2-drug fixed-dose combination
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်ငွေနည်းတိုင်းပြည်များအတွက် ART ဆေး ၂ မျိုးတွဲ တနှစ်စာကုန်ကျငွေ
First-line regimens DDD 2010 2011 2012 2013
[ABC+3TC] [60+30]mg4157 150 161 112 ဒေါ်လာ
[d4T+3TC] [6+30]mg447 46 45 46 ဒေါ်လာ
[d4T+3TC] [12+60]mg240 39 39 36 ဒေါ်လာ
[ZDV+3TC] [60+30]mg473 71 65 55 ဒေါ်လာ
[LPV+RTV] [100+25]mg3166 139 137 108 ဒေါ်လာ
[LPV+RTV][80+20]mg/ml4174 160 146 146 ဒေါ်လာ
စာရေးထားတာ ၅ နှစ်တိတိရှိပြီ။ တွဲတင်တဲ့ဆေးပုံက ကနေ့မှရတယ်။ ယူအက်စ်အေမှာ HIV တွေ့သူတွေကို အခမဲ့ ပေးနေတဲ့ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပို့ပေးသူ ကျေးဇူး။
ဆရာဝန်ကျွန်တော် ဒေါက်တာ့စ်ဒေးကို သတိမထားမိပါ။ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ဟာ ဆရာဝန်များနေ့ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ မဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယမှာက ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကားမှာတော့ ဆရာဝန်နေ့ကို မတ်လ (၃ဝ) ရက်ကို သတ်မှတ်ဘို့ သမတ ဂျော့ခ်ျ ဘွတ် လက်ထက်က ဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ကစပြီး ကျင်းပကြတယ်။ ကျူးဘားမှာ ဒီဇင်္ဘာ (၃) ရက်။ အီရန်မှာ သြဂုတ် (၂၃) ရက်။ ဗီယက်နမ်မှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၇) ရက်။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဆရာဝန်ဖမ်းတဲ့နေ့လို့ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ။
ကျွန်တော့်မှာ ဆရာဝန်ဆိုင်းဘုတ် မရှိတော့ပါ။ နားကြပ်လေးလည်း အနားပေးထားရတာကြာပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်တွေ ဟက်ပီးနိုင်ကြပါစေသတည်း။
လူငယ်တဦးက ဆရာ ကျွန်တော် ဗမာစာကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ရေးတတ်ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ ဆရာဇေယျက အကြံပေးပါသတဲ့။
မြန်မာစာတွေ နာနာဖတ်ပေးပေါ့။ လောကီရော လောကုတ္တရာရောပေါ့ကွာ။ လောကီဆိုတာကတော့ ပျို့၊ ကဗျာ၊ ရာဇဝင်တွေပေါ့။ လောကုတ္တရာဆိုတာကတော့ ဘုရားတရားနဲ့ စပ်တဲ့စာတွေပေါ့။ မင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားမှာ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းကြီးကလာတဲ့ ဥပမာ ဥပမေယျ သဘောသကန်တွေ၊ ဂရိတ်ဘာသာ၊ လက်တင်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ဘာသာတွေမှာပါတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းများ ပါဝင်သလို တို့မြန်မာ အစဉ်အလာ အတွေးအခေါ် အရေးအသားမှာလည်း ပါဠိဘာသာမှာပါတဲ့ အတွေးအခေါ် ဥပမာ ဥပမေယျတွေ၊ ဗေဒင်ကျမ်း၊ ဆေးကျမ်း၊ နက္ခတ်ကျမ်း၊ စသည်တို့မှာပါတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေ၊ ကဗျာ လင်္ကာ ရာဇဝင်မှာပါတဲ့ စကားလှ၊ စကားချော၊ စကားလုံး ပြောင်ပြောင်တွေ၊ ပေါရာဏခေါ်တဲ့ ရှေးစကားဟောင်းတွေ၊ ပေါရာဏမဟုတ်ပေမယ့် ခုခေတ်မှာ အသုံးနည်းတဲ့ ဒေသန္တရဝေါဟာရတွေ ပါနေတယ်။ ဒါကို ကျွမ်းကျင်မှ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိတယ်။
ဇေယျဆိုတာ မြန်မာ့မျက်ပွင့်ကို ရေးတဲ့ ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တန်းသင်နေချိန်က စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့မျက်ပွင့်ထဲမှာ -
အကြောင်းအရာတခုကိုမူတည်၍ မဂ္ဂဇင်း သတင်းစာတို့တွင် ရနိုင်သည့်နေရာနှင့် တော်လျော်အောင် အတိုချုပ်၍ တိုင်တည်း အမြန်ရေးသားရသည်။
သတ်ပုံသတ်ညွှန်းများကို ရှေ့နောက်ညီညွတ်အောင် ပြုခြင်းမှတပါး
တမြို့တည်းတွင်၊ တရိုတသေ၊ ကမ္ဘာ့တဝက်လောက်၊ ရွာတရွာ၊ သမိုင်းဟောင်းကလေးတစောင်၊ အနည်းငယ်မှတပါး၊ အဆတရာကောင်းလျက်၊ တခါက၊ တကယ့်ငှက်နှင့် တကယ့် လရောင်ကလေးများ။
အခုတော့ နောက်လူတွေက မြန်မာ့မျက်တစ် လုပ်လိုက်ကြပါပြီ။
https://www.facebook.com/825524590911355/posts/1888407591289711/ မှာ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း တင်ထားတယ်။ ကျေးဇူး။
၁။ ဆရာရှင့် သမီးအသက် ၃၅ နှစ်ပါ အကြောရောင်ရောဂါနဲ့ပက်သက်ပြီးမေးမြန်းချင်လို့ပါ (ပတ်သက်လို့ရေးရ)
၂။ ဆရာရှင့် ဆံပင်ဆိုးဆေးနဲ့ဓာတ်မတည့်လို့ဖြစ်တဲ့ အနာတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ ကုသနည်းရေးထားတာရှိလား သိချင်လို့ပါ (ပတ်သက်လို့ ရေးသင့်။)
၃။ ဆရာ အအေးပက်မယ် လို့ရေးတာလား၊ အအေးပတ်မယ်လို့ရေးရတာလားရှင့်။ (အအေးပတ်လို့ ရေးရ။)
၄။ ဆရာ ပက်သက်၊ ပတ်သတ် ဘယ်ဟာက အမှန်ဖြစ်ပါလည်းခင်ဗျာ (ပတ်သက်လို့သာရေးရ။)
၅။ ဆရာ ဘယ်လိုစမ်းသက်မှုမျိူး လုပ်ရပါလည်ဆရာ။ (စမ်းသပ်လို့သာ ရေးရ။)
၆။ ဆရာရှင့် ကျမ အသက် ၃၆ နှစ်ပါရှင့်၊ သား နှစ်ယောက်ရှိပါတယ် အငယ်လေးက ၁၀ ထဲမှာပါ၊ ဗိုက်ခွဲပြီးမွေးထားတာပါ၊ ပလပ်လန် အိပ်ပြီးနည်းနည်းကြာရင် ဘေးစောင်းဖို့ခက်ပါတယ် (ပက်လက်လန်လို့ ရေးရတယ်။)
ခုနစ်ရက်တပတ် (မြန်မာစာရေးထုံးကျမ်း သီရိပျံချီ ဦးသာမြတ်)
တစ်ကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အဓိကသုံးနှုန်းပါလဲဆရာ
အခါ တရာလောက်တော့ တင်ပြထားတယ်။
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လဟာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုနှစ် ပဌမဝါဆိုလဆန်း (၁၂) ရက်ကနေ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း (၁၂) ရက်နေ့အထိ ကျရောက်တယ်။ ဇူလိုင်လမှာ မုတ်သုန်ဥတုရှိရာဒေသတွေမှာ မုတ်သုန်မိုး ဖြိုင်ဖြိုင်ရွာတယ်။
ဇူလိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကို ဂျူလီယက်ဆီဇာကို သူ့မွေးလဖြစ်လို့ ရောမဆီးနိတ်ကနေ ဂုဏ်ပြုမှည့်ခေါ်ခဲ့တယ်။ အရင်ကတော့ Quintilis ကွင်တီလစ်လို့ခေါ်တယ်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာ အပူအိုက်ဆုံးလနဲ့၊ တောင်ခြမ်းမှာ အအေးဆုံးလ ဖြစ်တယ်။
ဇူလိုင် ၁ ရက် = ဆရာဝန်များနေ့ (အိန္ဒိယ)၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဆိုမာလီ)၊ ကနေဒါနေ့၊
ဇူလိုင် ၃ ရက် = လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဘဲလားရုစ်)၊
ဇူလိုင် ၄ ရက် = ၁၇၇၆ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ယူအက်စ်)
ဇူလိုင် ၅ ရက် = နိုင်ငံတကာသမဝါယမနေ့၊ ရေတပ်မတော်နေ့ (ယူကရိန်း)၊ လူငယ်များနေ့ (စင်္ကာပူ)။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (အယ်လ်ဂျီးရီးယား)၊ (ကိပ်ဗာဒီ)၊ (ဗင်နီဇွဲလား)၊
ဇူလိုင် ၆ ရက် = အမေနေ့ (တောင်ပိုင်းဆူဒန်)
ဇူလိုင် ၉ ရက် = အမျိုးသားသစ်ပင်နေ့ (မက်ဆီကို)
ဇူလိုင် ၉ ရက် = လွတ်လပ်ရေးနေ့ (၁၈၁၆ အာဂျင်တီးနား၊ တောင်ဆူဒန်)၊
ဇူလိုင် ၁ဝ ရက် = လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဘဟားမား)
ဇူလိုင် ၁၁ ရက် = ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့
ဇူလိုင် ၁၂ ရက် = အဖေနေ့ (ယူရူဂွိုင်း)
ဇူလိုင် ၁၉ ရက် = ကလေးများနေ့ (ကျူးဘား၊ ပနားမား၊ ဗင်နီဇွဲလား)
ဇူလိုင် ၂ဝ ရက် = လွတ်လပ်ရေးနေ့ (၁၈၁ဝ ကိုလမ်ဘီယာ)
ဇူလိုင် ၂၁ ရက် = အမျိုးသားနေ့ (ဘယ်လ်ဂျီယန်)
ဇူလိုင် ၂၃ ရက် = တော်လှန်ရေးနေ့ (အီဂျစ်)
ဇူလိုင် ၂၅ ရက် = ဖွဲ့စည်းပုံနေ့ (ပွါတိုရီကို)
ဇူလိုင် ၂၆ ရက် = မိဘများနေ့ (ယူအက်စ်)၊ သစ်ပင်နေ့ (သြစတေးလျ)၊ ရေတပ်မတော်နေ့ (ရုရှား)၊ ဖခင်နေ့ (ဒိုမီနီကန်)၊
ဇူလိုင် ၂၆ ရက် = လွတ်လပ်ရေးနေ့ (မောလ်ဒိဖ်)
ဇူလိုင် ၂၈ ရက် = လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ပီရူး)
ဇူလိုင် ၃ဝ ရက် = လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဗန်နော်တူး)
၁၆၈၇ ဇူလိုင် ၅ ရက် = အိုက်ဆက်နယူတန်က ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲအားကိုစတင်တွေ့ရှိ။
၁၇၈၅ ဇူလိုင်လ ၆ ရက် = အမေရိကန်ဒေါ်လာ စတင်သုံးစွဲ။
၉၅၁ ဇူလိုင်လ ၈ ရက် = ပဲရစ်မြို့စတင်။
၁၉၆၉ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် = ပဌမဆုံး လူစီးနင်းလိုက်ပါသည့် အပိုလိုအာကာသယာဉ် လကိုရောက်ရှိ။
- နိုင်ငံတကာ = လီလီပန်း၊
- မြန်မာဝါဆိုလ = ပုန်းညက်ပန်း၊ ဝါခေါင်လ = ခတ္တာပန်း၊
- Cord Blood Awareness Month ချက်ကြိုးသွေးအသိပညာပေးလ၊
- International Group B Strep Throat Awareness Month စထွက်ပ် (ဘီ) လည်ချောင်းနာရောဂါအသိပညာပေးလ၊
- Juvenile Arthritis Awareness Month ကလေးသူငယ်အဆစ်နာအသိပညာပေးလ၊
- World Hepatitis Day ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်ရောဂါနေ့ = ဇူလိုင် (၂၈) ရက်။
ဆယ်နှစ်ရာသီခွင်ဟာ ဇူလိုင်မှာ (ကင်ဆာ) နဲ့ (လီယို)၊ ကရကဋ် နဲ့ သိဟ်ရာသီဖြစ်တယ်။ (လီယို) ဆိုတာ ခြင်္သေ့၊ ကင်ဆာကဆိုးတယ်။ ကင်ဆာဆေးသစ်တွေပေါ်နေပါတယ်။ ကင်ဆာကျဆုံးပါစေ။
1 Canada Day / Dominion Day ကနေဒါနေ့၊ ဒိုမီနီယံနေ့၊
1 International Joke Day နိုင်ငံတကာ ဟာသနေ့၊
2 World UFO Day ကမ္ဘာ့ပန်းကန်ပြားပျံနေ့၊
4 National Country Music Day ကျေးလက်တေးဂီတနေ့၊
5 National Bikini Day ဘီကီနီနေ့၊
6 International Kissing Day နိုင်ငံတကာအနမ်းနေ့၊
11 World Population Day ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့၊
14 National Nude Day ကိုယ်လုံးတီးနေ့၊
20 Moon Day သော်တာလမင်းနေ့၊
24 Cousins Day ဝမ်းကွဲများနေ့၊
26 Aunt and Uncle Day ဦးလေးနှင့် အဒေါ်များနေ့၊
30 Father-in-Law Day ယောက္ခမနေ့၊
30 International Day of Friendship မိတ်ဆွေဖြစ်နေ့၊
11. November နိုဝင်္ဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/november.html
ဇူလိုင်လရဲ့ကျောက်မျက်ရတနာဟာ ပတ္တမြားဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ သွေးဖြစ်တယ်။ ဇူလိုင်လရောက်ရင် မုတ်သုန်မိုးနဲ့အတူ သွေးမြေကျတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တွေ ၁၉၄၇ ဇူလိုင် (၁၉) ရက်မှာ သွေးမြေကျခဲ့တယ်။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင် (၇) ရက်မှာ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရကြောင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတယ်။
ဖျက်မြင်းကို ဖြတ်မျဉ်းလို့ စာလုံးပေါင်းထားတာ အခုဘဲ တယောက်ရေးထားတာတွေ့လို့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ပြောခဲ့တယ်ဆရာ
ဟုတ်။ မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်စေရေး စည်းမျဉ်းဆွဲသင့်ဟု တင်ပြရာ စီးမြင်းဆွဲလာသည်။
ကျွန်ုပ်သည် လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဖက်များအား လေးစားသမှုဖြင့် မိမိသိရှိ တတ်ကြွမ်းမှုများကို မျှဝေ သင်ကြားပေးပါမည်။ မိမိ၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း တိုးတက်လာစေရန် တတ်ကြွမ်း နားလည်မှုများကို အသုံးချသွားပါမည်။
Physician, first do no harm သမားတော် - ပဌမဆုံးအချက်က သူတပါးကို ဘေးမဖြစ်စေနဲ့ဆိုတာလည်း ဟစ်ပိုခရေးတီးစ် အဆိုအမိန့်လို့ ယူကြပါတယ်။ ရှေးဟောင်းဂရိစာထဲမှာတော့ အထောက်အထား မတွေ့ပါ။ ဆရာဝန်တွေ ကိုယ့်ကြောင့် ရောဂါ မပျောက်သည်ရှိပါစေ၊ ကိုယ့်ကြောင့် လူနာကို ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့။
ဆရာဝန်မဟုတ်သူများအတွက်ပါ မှန်ကန်ကောင်းမွန်လှတဲ့ အဆိုအမိန့်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ ကမ္ဘာမှာ လူဆိုတာ ဆီးရီးယားဒေသက စတယ်လို့ သမိုင်းစာအုပ်တွေမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ တချို့က ရုရှား ကော့ကေးဆပ်ဒေသက စတယ်လို့လဲ ပြောကြတယ်။ အဆီးရီးယား အင်ပါယာဟာ ကမ္ဘာ့ အစောဆုံး အင်ပါယာ ဟုတ်ပါသလား။ ဘီစီ ဘယ်ရာစုလောက်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဆရာ။ အာရီယန်၊ ဩစတြိလွိုက်၊ နီဂရိုးလွိုက်၊ မွန်ဂိုလွိုက်လူမျိုးတွေထဲမှာ ဘယ်လူမျိုးတွေက အစောဆုံးလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။
မေးခွန်းက ရောထွေးနေတယ်။ အစောဆုံးလူသားကတမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုကြီးတွေကတမျိုး၊ လူသားတွေ နေထိုင်ခဲ့ကြတာကတမျိုးနဲ့ လူသား မျိုးနွယ်တွေကတမျိုး။ သမိုင်းကလည်းတမျိုး ရှိသေးတယ်။
(က) Ancient Humans အစောဆုံးလူသားတွေ့ရှိချက်များ၏လေ့လာမှုတွေလုပ်နေတယ်။ အသစ်တွေရှိချက်တွေရှိလာတယ်။ တွေ့ရှိချက်တခုက အစောဆုံးလူသားကို ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ Dmanisi ဂူထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် 1.85 သန်းကလို့ဆိုပါတယ်။ အသစ်တွေ့ရှိချက်တခုက တရုပ်ပြည် Shangchen ဒေသမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် 2.1 သန်းကတွေ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(ခ) The Ancient World Timeline ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးများ
BC 3500-550 Mesopotamian civilization မက်ဆိုပိုတေးမီးယားယဉ်ကျေးမှု
BC 3000-550 Egyptian civilization အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှု
BC 2500 - 609 Assyria Mesopotamian kingdom အဆီးရီးယန် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဘုရင့်နိုင်ငံများ
BC 2500-1500 Indus civilization အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှု
BC 2000-1200 Aegean civilization အေဂျီယန်ပင်လယ်ဝန်းကျင် ကြေးခေတ် ဂရိယဉ်ကျေးမှု
BC 2000-1000 Nubian civilization နိုင်းမြစ် (အီဂျစ် + ဆူဒန်) ယဉ်ကျေးမှု
BC 2000 - 500 AD Ancient China ရှေးခေတ်တရုပ်
BC 1500 – AD 100 Mesoamerica အမေရိကအလယ်ပိုင်းဒေသယဉ်ကျေးမှု
BC 1500-500 Vedic age အိန္ဒိယဝေဒခေတ်
BC 1200 – AD0Greek age ဂရိရွှေခေတ်
BC 1000 – AD 300 Kush ကွတ်ရှ် (အီဂျစ်တောင်ပိုင်း + ဆူဒန်)
BC 1000 – AD 500 Steppe empires (Nomadic empires) နောမန်းဒစ် ခေါ် စတက်ပီး အင်ပါယာများ
BC 500 -1200 AD Indian kingdom age အိန္ဒိယဘုရင်များခေတ်
BC 500-0Roman Republic ရောမသမတနိုင်ငံတော်ကာလ
BC 0- AD 500 Roman Empire ရောမအင်ပါယာခေတ်
(ဂ) Human settlements ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာ လူသားတွေအစောဆုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 14,000 ခန့်ကဖြစ်တယ်။ ကနေ့ခေတ် အစ်ဇရေးလ်နဲ့ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံနေရာမှာဖြစ်တယ်။ အစောဆုံးဒေသတွေကို အစဉ်လိုက် မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။
• Morocco မော်ရိုကို
• Turkey တူရကီ
• Ethiopia အီသီယိုပီးယား
• Israel အစ်ဇရေးလ်
• South Africa တောင်အာဖရိက
• Sudan ဆူဒန်
• United Arab Emirates ယူအေအီး
• Oman အိုမန်
• Congo ကွန်ဂို
• Libya လစ်ဗျား
• Sri Lanka သီရိလင်္ကာ
• Sumatra ဆူမားတရားကျွန်း
• Egypt အီဂျစ်
• Australia သြစတေးလျတိုက်
(ဃ) Human races လူသားလူမျိုးများ
1. Negroid (Black) race
2. Australoid (Australian Aborigine and Papuan) race
3. Capoid (Bushmen/Hottentots) race
4. Mongoloid (Oriental/Amerindian) race
5. Caucasoid (White) race ငါးမျိုးလို့ဆိုပေမဲ့ အဓိက ၃ မျိုးရှိတယ်။
၁။ Caucasoid ကော့ကေးဆွိုက် (အသားဖြူ)
၂။ Mongoloids မွန်ဂိုလွိုက် (အသားဝါညို)
၃။ Negroid နီဂရွိုက် (အသားမည်းနက်)
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၁/၄) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/11/timelines-of-world-history.html
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၂/၄) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/11/timelines-of-world-history_25.html
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၃/၄) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/11/timelines-of-world-history_0.html
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၄/၄) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/11/timelines-of-world-history_27.html
အမည် မသိ။ ဆန်းလှပါဘိ။ အထက်မှာ ပြာလဲ့လဲ့ ပန်းခရန်းရောင် အပွင့်၊ အောက်ခြေမှာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ခပ်သေးသေး အပွင့်။ နီစွေးစွေး အဖူးလေးက ထွက်နေသေး။ အရွက်တွေကလည်း အမျိုးမတူတာတွေနဲ့။
အမည်က လှသည် မဟုတ်။ အမြင်သည် လှ၏။ အမည်က ဆန်းသည်မဟုတ်။ အသွင်က ဆန်း၏။ ပန်းဖြစ်ပါ၏။
ဝေါဟာရနိုင်ငံရေး၊ စကားလုံးနိုင်ငံရေး၊ အရောင်အသွေးနိုင်ငံရေးမှသည် ပန်းကို ပန်းလိုမြင်တဲ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်လာပါစေသတည်း။
ကနေဒါမှာနေတဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံရေးထဲက လုပ်ဘော်ကိုင်ဘက်တဦးက ဖုန်းဆက်တယ်။ ဆရာ့အဖေနဲ့အမေပုံကို အမှတ်မထင် တွေ့သတဲ့။ ဟင်္သာတမှာနေတဲ့ သူ့အသိတယောက်က သီချင်းနောက်ခံမှာ သုံးထားတာတဲ့။ ကျွန်တော် တခါကတင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အဖေနဲ့အနေပုံကို မိဘကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတ အဖြစ်မြင်လို့ သီချင်းတင်သူက သုံးပါသတဲ့။
သတင်းပို့ပေးတဲ့သူက ကိုးကွယ်ရာဘာသာတမျိုး။ သီချင်းတင်သူ Aung Zin မောင်ဂဠုန်ကလည်း ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတမျိုး။ ကျွန်တော့် အဖေအမေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ကိုးကွယ်ရာဘာသာတမျိုး။
အရေအတွက်ဆို တစ် က အမှန်ဆိုဆရာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာတယောက်ကိုမေးကြည့်လိုက်တာ
ရေတွက်လို့ရတာကို တစ်ဆိုတာ ထွင်လုံးသာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်မြန်မာစာဆရာ ဆရာမတွေကတော့ အဲလို မသင်ပါ။ မသင်ပါကြောင်းလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာရေး၊ သက်သေပေါင်းများစွာပေးထားပြီးပါပြီ။
မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာ ခေါ် ပုံသေနည်းနဲ့ သင်ပေးရေးသား ဟောပြောနေတာတွေတိုင်းဟာ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးကျတာ မဟုတ်ပါ။
(၁) မ နောက် ဘဲ လိုက်။
ပဲ (ပဲး) = ပဲကြီးဟင်း၊ ပဲကြော်၊ ပဲလှော်၊ ပဲစဉ်းခုန်၊ ပဲချဉ်ပေါင်၊ ပဲစောင်းလျှား၊ ပဲပိစပ်၊ ပဲတီချဉ်၊ ပဲလင်းမြွေသီး၊ ပဲပုစွန်၊ စားတော်ပဲ၊ ဗိုလ်စားပဲ၊ မြေပဲ၊ ပဲစိမ်းစားဥ၊ ဝမ်းပဲငှက်၊ တပဲလေးရွေး၊ မပြောပဲ၊ မဆိုပဲ၊ မလာပဲ၊ မလုပ်ပဲ၊
ဘဲ (ဘဲး) = ဘဲဥ၊ ဘဲသား၊ ဘဲငန်း၊ ဝမ်းဘဲဟင်္သာ၊ မသွားဘဲ၊ မလာဘဲ၊ မလုပ်မကိုင်ဘဲ၊ မခေါ်ဘဲ၊ သနခါးဘဲကျားရိုက်၊
ပဲခူးရွှေမော်ဓေါစေတီက ကျောက်စာနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုဖတ်ပါ။ ခေါင်းလောင်းမှာလည်း စာတွေရှိတယ်။
(၃) ရေတွက်လို့ရရင် တစ်။
ပိုက်ဆံဆိုတာ ရေတွက်စရာမဟုတ်ပါလား။ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁ဝဝ ဆိုတာ ဂဏန်း (သင်္ချာ) မဟုတ်ပါလား။ တကျပ်တန်၊ တဆယ်တန်၊ တရာကျပ်တန် ပိုက်ဆံစက္ကူပုံတွေကို ခဏခဏတင်ပြထားပြီးပြီ။
မူကွဲစာလုံးတွေကို ပြစ်ပယ်ပြီး တသွေးတသံတမိန့် ရေးနည်း မမှန်ပါ။ သမတ နဲ့ သမ္မတ၊ ပဌမ နဲ့ ပထမ၊ ဒါး နဲ့ ဓါး၊ မုံ့ နဲ့ မုန့်၊ ကစွန်း နဲ့ ကန်စွန်း၊ ငပိ နဲ့ ငါးပိ၊ ယက္ကန်း နဲ့ ရက်ကန်း၊ ကျမ္မာ နဲ့ ကျန်းမာ၊ ချင်း နဲ့ ဂျင်း၊ သံပုရာ နဲ့ သံပရာ၊ ဘိတ်ကြားနဲ့ ဖိတ်ကြား၊ ကချေသည်နဲ့ ကခြေသည်၊ လက်ဖက် နဲ့ လ္ဘက်၊ မြမ္မာ နဲ့ မြန်မာ။
အမဲရောင်နဲ့ အမည်းရောင် ဘယ်ဟာအမှန်ပါလဲခင်ဗျ
အရင်အစိုးရတွေလက်လက်ထက်မှာ မဲခိုးသတင်းတွေ ထွက်ခဲ့တယ်။ မေးခွန်းတွေမှာ သမီးကောင်လေးနက် ဘာညာလို့ ရေးကြတယ်။ အောက်မဲညိုကို အောင်မဲညိုဆိုပြီး ၉၆ ပါးပျောက်တယ်လို့ ရေးကြတယ်။ သတ်ပုံမှားမှတော့ မှန်တယ်ထင်သူတွေ မှားပြီ။
၁။ ဖိတ်ကြား လား ဘိတ်ကြား လား ဆရာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖိတ်ကြား ပဲ တွေ့နေရလို့ပါ
၂။ ဖိတ်စာလား ဘိတ်စာလားဆရာ
၃။ ဆရာရေ ဖိတ်ကြားစာ နဲ့ ဘိတ်ကြားစာ ဘယ်ဟာမှန်လဲအလင်းပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ
ဘိတ် = ဖိတ်
(မွန်) ဖိတ် = ဖိတ်ကြားသည်၊ ပင့်ဖိတ်သည်။ ဖ ဦးထုပ်နှင့်ရေးသည်က ပိုမိုခိုင်လုံချေသည်။
ကျွန်တော့်အမြင် နှစ်မျိုးလုံး သုံးနိုင်တယ်။
၁။ ဘိတ်ငါးပိ တော့ မှန်လားဗျ။
ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်း = ယေး ဗိတ် ဓါးဝယ်
ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်ဆိုတာ နာမည်ရ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတဦး ဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၂ မှာကွယ်လွန်တယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဘိတ်သူအမည်နဲ့ အကောင့်တွေတွေ့တယ်။
ဘိတ်ငပိထောင်း ကောင်းတယ်။ ငပိ နဲ့ ငါးပိက မူကွဲသတ်ပုံ။ အမျိုးအစားကောင်းရင် ငပိရေးရေး ငါးပိရေးရေး စားကောင်းတယ်။
တမြန်နေ့က မေးခွန်းမေးသူတယောက်က မြိတ်ကို လာလည်ပါလို့ ဖိတယ်။ ကျေးဇူး။ ထားဝဝ်သာ တာဝန်နဲ့ တပတ်တိတိ နေခဲ့ဖူးတယ်။ မြတ် ခေါ် ဘိတ်ကို မရောက်ဖူးသေးပါ။
တတ် နှင့် တက် သို့မဟုတ် မြန်မာစာမှန်အောင်ရေးတတ်သူ နည်းသွားပြီ
1. The Money Drop Myanmar ရဲ့ အစီအစဉ်တခုမှာ TV ကနေကြည့်တာ အဖြေလေးခုပေးပြီး တခုရွေးရတာဆရာ။ ကျနော်က မတ်တတ်ရပ်လို့ ဖြေတာကို အဲဒီအစီအစဉ်က computer operator ပဲ မှားဖြေသလား မသိပါ။ သူတို့က မတ်တပ်ရပ်ကို အမှန်ဖြေပြတော့ တော်တော်အံ့သြသွားတယ်ဆရာ။ ကျနော်လဲ မမှားနိုင်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတယ်ဆရာ။ ခုလိုဆရာပြောပြတော့ ပိုသေချာသွားတာပေါ့။ (မတ်တတ်ရပ်က အမှန်။)
2. ဆုံးမစာတခုမှာ စေတနာအမှားကြောင့် ဝေဒနာဖြစ်သွားတက်သည်လို့ ရေးတာဖတ်ရတယ်။ (ဖြစ်သွားတတ်သည် လို့ ရေးရတယ်။)
3. ဆရာ (တက်) နဲ့ (တတ်) ကဘယ်နေရာမှာ ဘယ်ဟာကိုသုံးသလဲ ကွဲကွဲပြားပြားမသိလို့ပါဆရာ။ တခါက ဆရာမတယောက် ပြောဖူးတယ် အမြင့်ကို တက်တာကလွဲလို့ကျန်တဲ့ တတ်ကိုပဲ သုံးတယ်ဆို ဟုတ်ပါသလားဆရာ။
4. ဆရာ တခုလောက်မေးပါရစေ။ အတက်ပညာလို့ သုံးသလား၊ အတတ်ပညာလို့ သုံးသလားဆရာ။ (အတတ်ပညာက အမှန်။)
5. ဆရာ မတ်တတ်ရပ် နဲ့ မတ်တပ်ရပ် ဘယ်ဟာကမှန်ပါသလဲ။ (မတ်တတ်ရပ်က အမှန်။)
6. ဆရာ အတက်ပညာလို့ သုံးသလား၊ အတတ်ပညာလို့ သုံးသလားဆရာ။ (အတတ်ပညာက အမှန်။)
7. ဆရာ အတက်နိုင်ဆုံးကိုရေးမယ်ဆို အတက်လား၊ အတတ်လား။ မသိတာ မတက်တာဆိုရင်ရော တက်လား၊ ကက်လား၊ ခဏခဏမှားလို့။ (အတတ်နိုင်ဆုံး၊ မတတ်တာက အမှန်။)
8. ဆရာရှင့် သမီးအသက် ၃၈ နှစ်ပါ။ ဒုတိယကိုယ်ဝန် ၁၅ ပတ်မှာ သွေးဆင်းပါတယ်ဆရာ။ ultrasound ရိုက်တော့ ကလေးနှလုံးခုန်တယ် အချင်းလည်း ပုံမှန်လို့တော့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ သွေးကတော့ တညနေဘဲဆင်ပြီး မဆင်းတော့ပါဘူးဆရာ။ စိုးရိမ်ရလား။ ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ (ဘာဖြစ်တတ်လဲလို့ ရေးရတယ်။)
9. ဆရာသေခြာစွာဖတ်ပါတယ် မသုံးတက်လို့ပါခင်ဗျာ (မသုံးတတ်။ ပို့စ်တင်ထားတယ်။ သေချာလို့ ရေးရတယ်။)
10. တက် နဲ့ တတ် လည်း အများအားဖြင့် မှားကြတယ် ဆရာ။ ဆရာအချိန် ပေးနိုင်ရင် တင်ပေးစေချင်လို့ပါ။
11. ပညာတက်လား၊ ပညာတတ်လား၊ ပြောပြပါရှင့်။ (ပညာတတ်က အမှန်။)
12. ဘလော့ကိုဝင်မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ (မကြည့်တတ်)
13. ဝင်ကြည့်တက်သွားပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
14. သမီး မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ ညွန်ပြပါနော်။ ကူးစက်ရောဂါဆိုတာ ရောဂါနာမည်လား၊ ကူးစက်စေတက်သောလား။ ဘလော့ကို ဝင်မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ။ ဝင်ကြည့်တက်သွားပါပြီ။ (မကြည့်တတ်၊ ကူးစက်စေတတ်သော၊ ဝင်ကြည့်တတ်လို့ ရေးရတယ်။)
15. သမီး အသက် ၂၇ ပါ အရပ် ၅ ပေ၃ လက်မရှိပြီး ပေါင် ၁၀၂ရှိပါတယ် အကြောအရမ်းတက်တတ်ပြီး နေ့ရက်တိုင်း ဘာမှ မလုပ်ချင်သလိုဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းနေသလိုခံစားရပါတယ်ဆရာ အစားလည်းပုံမှန်စားပြီး အိပ်တာတော့ တခါတလေ နောက်ကျတတ်ပါတယ်ဆရာ ကွန်ပြူတာလည်းနေ့စဉ်သုံးရပါတယ်ဆရာ တခါတလေတော့ အပြင်တွေပတ်ရလို့ မသုံးရပါဘူးဆရာ သမီးအလုပ်က Marketing အလုပ်ပါဆရာ မျက်မှန်က power 100 နဲ့ 70 ရှိပါတယ် အကျင့်ပါမှာစိုးလို့ လိုအပ်မှပဲ တက်ပါတယ်ရှင် အဲ့လိုမျိူးရောလုပ်လို့ရလားဆရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရော ဆိုင်ပါသလားရှင်
16. မွေးပြီးနာရီဝက်ဆို ကလေးက အချိုဓာက် ကျတက်တယ်လို့ စာထဲမှာဖတ်ရလို့ပါဆရာ အဒါလေး ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ (ကျတက်တယ် မဟုတ်။ ကျတတ်တယ်တယ်လို့ ရေးရ။ ကျတက်တယ်ဆိုတာ တက်လိုက် ကျလိုက်။)
17. သွေးကတော့ တညနေဘဲဆင်ပြီး မဆင်းတော့ပါဘူးဆရာ။ ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
လက်မယဉ် = လက်ဆော့သူ
အဲလိုအမှားမျိုးက အမြန်ရေးရလို့ မဟုတ်။ ကီးဘုတ်ကြောင့် မဟုတ်။ ခေတ်ဆန်အောင်ရေးတာ မဟုတ်။ မြန်မာစာကို အလေးထားမှုနည်းလို့နဲ့ မြန်မာစာကို မှန်အောင်သင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဆရာမတွေ နည်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။
သတ်ပုံမှန်သေးသည်။ မြန်မာစာဆင်ဆာလူကြီးတွေက မတွေ့ကြသေးလို့ ကံကောင်းပါသည်။
အသေအချာ ရွှေတချောင်းလို့တင်ပြတာကို ကွန်မင့်တခုက လာတယ်။ ရွှေတစ်ချောင်း တဲ့။ အဲတာ မှားတယ်။ မမှန်။ လျှာရှည်တာ။
ဒို့မြန်မာလူမျိုးအတွက်ရေးသည် (စာတပုဒ် ရွှေချောင်းတချောင်း) အပိုင်း (၁၇/၂၈) - လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး https://www.youtube.com/watch?v=ZJ28VEhrogs
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်စဉ်းစားမိတာတခုရှိပါတယ်ဆရာ။ (ဂျူးလိယက်ဆီဇာနဲ့တော့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ပါ) ဥရောပမှာ၊ အီဂျစ်မှာ၊ တရုတ်နိင်ငံမှာ အိန္ဒိယမှာ သူတို့ရဲ့သမိုင်းကို BC 1000-2000 ကျော်ကစပြီး မှတ်တမ်းရှိကြတယ်။ BC 4000က အီဂျစ်မှာ ဘယ်ဘုရင် BC ၁၀၀၀ က တရုတ်က ဘယ်မင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ အထောက်အထားတွေ ရှိကြတာ တွေ့ရပါတယ်ဆရာ၊ စာတွေမှာလဲဖတ်ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကျတော့ ဘယ်လိုကြောင့် AD 1044 အနော်ရထာ ခေတ်ကျမှပဲ စပြီး သမိုင်းရယ်လို့ သတ်မှတ်နိင်တယ်လို့ ဆိုတာဟာ ဘာကြောင့်များလဲခင်မျာ့။ သူတို့ဆီမှာ BC 2000-1500 လောက်က ဘုရင်တွေ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေတ်မှာ ကျနော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိင်ငံဖြစ်လာမယ့်ဒေသမှာ ဘယ်လိုလူတွေ နေခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်မဖေါ်ထုတ်နိင်သလဲ ဒီက လူတွေသမိုင်းလေ့လာမှုအားနဲလို့လားခင်မျာ့။
မြန်မာ့ရာဇဝင်သမိုင်းတွေကိုလည်း ဟိုရှေးခေတ်ကစပြီး ရေးတာတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာအစ ဘယ်ကဆိုတာတော့ ငြင်းနေကြဆဲ။ ခိုင်ခိုင်မာမာငြင်းတာ ကောင်းတယ်။
မြန်မာလို အစောဆုံးရေးသားတဲ့ ရာဇဝင်ကျမ်းတွေထဲက ထင်ရှားတဲ့ ဦးကုလား မဟာရာဇဝင်ကြီးမှာ ပဏာမ ပုဗ္ဗကဂန္ထာရမ္ဘကနေ စတင်တယ်။ ဘာသာရေးစာပေ အကိုးအကားတွေ ပါတယ်။ သရေခေတ္တရာခေတ်က တတိယတွဲမှာ ပါတယ်။ အနော်ရထာက စတုတ္ထတွဲ။ အင်းဝမင်းခေါင်က အဋ္ဌမတွဲ။ ဆင်ဖြူရှင်က စုဒ္ဒသမတွဲ။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးတဲ့ အသစ်မြင်ဗမာသမိုင်း (၁၉၇၅) ထဲမှာ ဗမာအကြိုသမိုင်းနဲ့စတယ်။ ဗမာအကြိုသမိုင်းကို ပြောယင် ဗမာနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအခြေခံကစပြီး ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ကမ်ဗြီယံယုဂ် (Cambrian Period) အတွင်းမှာ ဒီဗမာနိုင်ငံလို့ ခေါ်တဲ့နေရာဟာ ပင်လယ်အတိပါဘဲ လို့ ရေးတယ်။
ဦးဖေမောင်တင် ၁၈-၃-၁၉၇၃ နေ့ နေ့စွဲနဲ့လက်ရေးစာမှာ ပုဂံရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျှင် တုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟု ဆိုကြ၏။ အငြင်းအခုံဖြစ်ပြီး တယောက်နှင့် တယောက် ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။
ပုဂံပြည်ထက် နှစ်ပေါင်းများစွာစောသော သရေခေတ္တရာ ရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျှင် ဘာထမ်းပြီး ပြောကြမည်နည်း။ တုတ် မထမ်းပါနှင့် တူရွင်းထမ်းကြပါဟု ပြောချင်ပါသည်။ ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို တူးဖေါ်ကြပါဟု ပြောလိုပါသည်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တူရွင်းထမ်းချင်သူ ရှားပြီ။ ပေါက်ပြားနဲ့တူးပြီးလေ့လာထားခဲ့တာတွေကို ဟိုပြင်ဒီပြင် လုပ်သူတွေ ရှိလာတယ်။ ရှေးကသာ အထုံအမွှမ်းတွေများခဲ့တာ မဟုတ်။ နောက်ဆရာတွေကလည်း ကိုယ့်ဘုရင်တွေရဲ့ မယ်တော်တွေကို တန်ခိုးရှင်တွေနဲ့ ပေးစားကြတယ်။ အခုထိ။
ဦးဖေမောင်တင်ရေးတဲ့ သတ်ပုံတွေကိုပါ လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ တယောက်နှင့် တယောက်လို့ ရေးတယ်။ ဖေါ်လို့ ရေးတယ်။ အဲလိုရေးတာ မှားတယ်လို့ ၁၉၈၀ ကျော်မှာ တက်လာတဲ့မြန်မာစာပါမောက္ခတွေက ပြောကြတယ်။ ၁၉၇၃ ဆိုတာ ရှေးမကျသေးပါ။ တိုင်းပြည်သမိုင်းနဲ့ မြန်မာစာသမိုင်းကို ပြင်ချင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးရှိကြတယ်။
ဆရာရှင် အသက် ၂၃မိန်းကလေးပါရှင် မေးရိုးမေးစေ့မှာ ဝက်ခြံဘုကြီးတွေထွက်ပီး (ပြီး) အထိမခံနိင်လို့ပါရှင့် ရေလဲသောက်ပါတယ် ဝမ်းတော့ နည်းနည်းချုပ်ပါတယ်ရှင် အဲ့လိုဖြစ်နေတာ ရက် ၂၀လောက်ရှိပါပီ (ပါပြီ) ရှင် အနာတွေက မနက်အိပ်ယာနိး (နိုး) ရင် ချပ်နေပါတယ်ရှင့် ညနေ့ဆို ယားp (မြန်မာစာမှာ အင်္ဂလပ်စာလုံး ပီ မရှိ) ဘုတွေ ထွက်လာပါတယ်ရှင် ဘယ်လိုပျောက်အောင် လုပ်က (လုပ်ရ) ပါမလဲရှင့်
Acne question ဝက်ခြံမေးခွန်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/acne-question.html
Acne Scars ဝက်ခြံအမာရွတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/acne-scars.html
Acne vulgaris ဆိုးတဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne-vulgaris.html
Acne ဝက်ခြံ ရောင်စုံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne.html
မြန်မာစာမှာ အင်္ဂလပ်စာလုံး ပီမရှိ။ ဝက်ခြံနဲ့လည်း ကလို့ရတယ်။ မနေ့က ဝက်ခြံမေးသူတယောက်က သတ်ပုံမှန်တယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးပါ လက်မောင်းထဲ သုံးနှစ်ခံတားဆေးထဲ့တာ ၅ လပိုင်းက ပြည့်ပါတယ် ပြည့်တဲ့လ ရာသီငါးရက်လောက်လာပါတယ် ၆ လပိုင့်း့ နေဖစ်ပီး (ဖြစ်ပြီး) အရေးပေါ်တားဆေး တပတ်တွင်း ၂ ကြိမ် သောက်မိပါတယ်ဆရာ နဲနဲလေးလာလိုက် မလာတော့လိုက် ဖစ်နေ (ဖြစ်နေ) လို့ပါ ခုဆို လုံးဝမလာတော့ပါဘူး အာ့ ဘာကြောင့်ပါလဲဆရာ ခုလိုမေးရတဲ့အတွက် ကန်တော့ပါ ဆရာ
အသက် မသိ။ အရေးပေါ်တားဆေးကနေ ရာသီမမှန် ဟော်မုန်းမမှန်ဖြစ်မယ်။ ဖစ် မဟုတ်။ ဖြစ်လို့ရေးရမယ်။ ဖစ်ဆို မဖစ် ဒေါ်ဖစ်။
မဖစ်သည် ဖစ်လမ်းမှာနေသော ဒေါ်ဖစ်ကြီး၏ သမီးဖြစ်ပါသည်။
ဆရာရှင့် သမီးအသက်က ၂၂နှစ် ရှိပါပြီရှင့် အိမ်ထောင်မရှိ အပျိုမိန်းကလေးပါရှင့် (ကန်တော့ပါရှင့်) အပျိုဖော်စဝင် ကတည်းက အခုချိန်ထိ ရာသီသွေးဆင်းခြင်းက ငါးလ ခြောက်လ နေမှ တကြိမ်ပေါ်ပါတယ်ရှင့် ရာသီသွေးမပေါ်တဲ့ လတွေမှာလည်း နာကျင်ခြင်း ကိုက်ခဲခြင်း ဘယ်လိုဝေဒနာမှ မခံစားရပါဘူး ရှင့် တနှစ်ကိုတခါ OGနဲ့ ပြသပါတယ်ရှင့် အာထွာဆောင်းလည်း ရိုက်ပါတယ်ရှင့် အလုံးအကြိတ်တည်တာလည်း ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးရှင့် ပြသခဲ့ဖူးတဲ့OG တွေက စိုးရိမ်စရာမရှိပါ အသက် ၂၀ကျော်ရင်ကောင်းသွားပါမယ်လို့ပြောပြီး Penorit ဆိုတဲ့ဆေးကိုသောက်ဖို့ပေးပါတယ်ရှင့်
အဲ့ဒီဆေးကို သမီးသောက်လာခဲ့တာ အသက် ၁၇နှစ်ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လအထိ ပါဘဲရှင့် ဆက်မသောက်ဖြစ်တော့တာက ကိုယ်ဝန်တားဆေးလို့သိရလို့ အမြဲသောက်ရင် သားအိမ်ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါရှင့် အခုထက်ထိပုံမှန်မဖြစ်လို့ ဘယ်လို နေထိုင်ရမယ် ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဆရာသမီးကိုမျှဝေပေးလို့ရလားရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
Penorit ဆေးဆိုတာဘာလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/penorit.html
Amenorrhea ရာသီမလာခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/amenorrhea.html
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ရိုက်ဖူးပါတယ်ရှင့် အကုန်ကောင်းပါတယ်ရှင့်။ OG နဲ့ ပြတိုင်းဆေးဘဲသောက်နေရပါတယ်ရှင့် ဆေးသောက်ရင်တော့ (ကန်တော့ပါရှင့်) ရာသီပေါ်ပါတယ်ရှင့် ဆေးမသောက်ရင် ၅လခြောက်လ နေမှ ရာသီပေါ်ပါတယ်ရှင့် ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်မှန်း ရေရေရာရာ မသိရပါဘူးရှင့်
ဆရာကို တခုလောက်ထပ်မေးလို့ရမလားရှင့် အဲ့ဒီ Penorit ဆေးကို ၅နှစ်လောက် တလတကြိမ် သောက်ခဲ့တော့ အခု ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်လားရှင့်
ဆေးတိုင်းမှာ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေ ရှိတယ်။ မေးတဲ့သူမှာ ဘယ်လိုထူးခြားတာတွေဖြစ်နေသလဲ မသိ။
ပျို့-အန်၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ စိတ်မူပြောင်းလဲ၊ အိပ်မပျော်၊ ကိုယ်အလေးချိန် တကျ-တက်၊ ဝက်ခြံထွက်၊ ရင်သားတင်းနာ၊ လိင်စိတ်ပြောင်းလဲ၊ ကိုယ်မွေးပေါက် သို့မဟုတ် ဆံပင်ကျွတ်။
တကြိမ်၊ တနှစ်ကိုတခါ၊ တခုလောက်၊ တလတကြိမ် ရေးတာတွေမှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
ဂျူးလိယက်ဆီးဇာ ဟာ ရောမလွတ်တော်ထဲကအမတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်စစ်ဘုရင်အဖြစ်ခံယူလိုက်ရာ မည်သူစကားမှ နားမထောင်တောပဲ သူ့၏လူယုံတော် ပလူးစတတ်ကဓါးနဲ့ထိုးသတ်လိုက်ကြောင်းဖတ်ရှုရပါတယ် မှန်ပါသလားဆရာ
ကျွန်တော့ဘလော့မှာ ဆီဇာလို့ရိုက်ပြီး ရှာတာ စာ (၆) ပုဒ်ထွက်တာတယ်။
၁။ BC 600 ဘီစီ ၆၀၀ ကစတဲ့ သမိုင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2020/02/bc-600.html
၂။ Brutus ရောမနန်းတော်ကြီးထဲမှာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/12/brutus.html
၃။ Cleopatra ကလီယိုပါထရာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/cleopatra.html
၄။ Kirk Douglas ကတ်ဒေါက်ကလပ်စ် ကွယ်လွန် https://doctortintswe.blogspot.com/2020/02/kirk-douglas.html
၅။ The Roman Empire ရောမအင်ပါယာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/11/the-roman-empire.html
၆။ ဆဋ္ဌမတန်း သမိုင်းစာအုပ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/blog-post_22.html
သမိုင်းသုံးသပ်ချက်တွေကို သမိုင်းဆရာတွေက ရေးသားကြတယ်။ အမြင်မတူတာတွေရှိတယ်။ သမိုင်းဆရာ မဟုတ်သူတွေကလည်း အထင်ကို ရေးကြတယ်။ အမြင်မတူတာတွေ ရှိတယ်။
ဆဋ္ဌမတန်း သမိုင်းစာအုပ်ရေးသားတဲ့ ပါမောက္ခကတော့ သွက်သွက်ခါအောင် မှားတယ်။ ရာထူးတက်သွားပြီလားတော့ မသိ။
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ကျနော် ရုံးမှာ အမြဲပြောနေရတယ်ဗျ ဥပမာ တခုခု ကို တစ်ခုခုလို့ဘဲ ရိုက်နေကြလို့ပါဗျ အထောက်အထားပြပြီး သူတို့ကို ပြန်လည်ပြသပေးနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ကူပေးပါဦးဗျ ဆရာ
ရုံးတွေ ကျောင်းတွေ နေပါစေ။ ဝန်ကြီးတွေကလည်း အဲလိုရေးနေကြတယ်။ ဝန်ကြီးတွေအထက်က မြန်မာစာအဖွဲ့ အမိန့်အရ ရေးနေကြတာ။ မေတ္တာစာနဲ့သာထိုက်တယ်။
ဆန်ဖြူဖြူတခွက်မျှ ထွက်နိုင်ပုံမရ။ (ဦးပုည မေတ္တာစာ)
ဦးထင်ဖတ် ခေါ် မောင်ထင် (၁၉၀၆-၂၀၀၆) ဟာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ စာရေးဆရာ ပညာရှင်တဦးဖြစ်တယ်။ ၁၉၄၇ က ရေးသားတဲ့ ငဘဝတ္ထုဟာ အကြော်ကြားဆုံးဖြစ်တယ်။ မောင်ထင်ရေးတဲ့စာတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖတ်ဖူးတယ်။ အကိုးအကားလိုချင်လို့ ရှာခိုင်းတာ (၅) အုပ်ရလာတယ်။
ကမ္ဘာ့စာပေအညွှန်း လေးအုပ်တွဲ (၁၉၈၁ မူရင်း)
ဂန္ထဝင်မြောက် ပင်ကိုယ်ရေးဝတ္ထု (၁၉၉၁ ပြန်ထုတ်)
စာအုပ်နှင့်စာ (၂၀၀၆ ပြန်ထုတ်)
ဂန္ထဝင်သံခိပ် (၂၀၁၁ ပြန်ထုတ်)
ကမ္ဘာ့စာပေအညွှန်း လေးအုပ်တွဲကလွဲရင် ပြန်ထုတ်စာအုပ်တွေမှာ သတ်ပုံတွေကို ပြင်ထားတယ်။ ကမ္ဘာ့စာပေအညွှန်း အမှာစာမှာ -
သည်လိုပုံနဲ့တော့ မြန်မာစာဟာ ယထာဘူတစ်ခေတ်ကို ဦးတည်နေပြီ။
၁။ age 19 1 လကျော်ပြီထင်တယ် နှစ်ကြောင်းပေါ်လို့ ဆေးဆိုင်ခုကို ပြောတော့ အဲ့တာတွေပေးတယ် ၃ ရက် သောက်ရတယ် မဆင်းလို့ ထပ်သွားတော့ Penorit ၆ လုံး ၃ ရက် ထပ်ပေးတယ် ခုထိ အဆင်မပြေသေးဘူး Online မှာ penorit က ပိတ်ထားတယ်လို့တွေ့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ပြောပေးပါ Dr
မေးခွန်း မပြည့်စုံ။ 1 လကျော်ပြီထင်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ မသိ။ နှစ်ကြောင်းပေါ်လို့ ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်လား စဉ်းစားရ။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်နည်း မပေးပါ။ မေးခွန်းပါဆေးအကြောင်း သိလိုရင် ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။
၂။ Penorit ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အချိန်သောက်ရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာ။
၃။ ဆရာရှင့် သမီးက Ygn ကပါ။ သမီးတစ်နေ့က penorit ဆေးကို ၁ လုံး မနေ့ကတလုံး သောက်လိုက်ပါတယ်။ သောက်ပြီး ဖျားချင်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ်လည်းနည်းန်မရှိ၊ည်းပူပါတယ်။ လူကအားမရှိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ခေါင်းလည်းမူးပါတယ်။ အဲဆေး တခါမလည်းမသောက်ဖူးပါဘူး။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါလဲဆရာရှင့်။ အဲလိုဘဲ ဖြစ်တတ်တာလား။ ကိုယ်ပူလို့အဖျားပျောက်ဆေးတွေ သောက်သင့်လား သိချင်လို့ပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
၄။ ဆရာရှင့် Penorit (Norethisterone Acetate + Ethinyloestradiol) ဆိုတဲ့ ဆေးအကြောင်းနှင့် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကို သိလိုပါသည်ရှင်။
(၁) Penorit ဆေးမှာ Norethisterone Acetate 10mg နဲ့ Ethinyloestradiol 0.02mg တွေပါတယ်။ မ-မျိုးဥ ထွက်မှာကို တားဆီးပေးတယ်။ နောက်ပြီး သားအိမ်အဝမှာရှိတဲ့ အကျိအချွဲကို စေးပြစ်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရမှာကို တားပေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူကို မပေးရ၊ ကလေးနို့တိုက်နေရင် သတိနဲ့ပေးတယ်။ နို့ထွက်နည်းစေမယ်။
(၂) Penorit ဆေးကို အိမ်ထောင်မရှိ၊ ကိုယ်ဝန်မရှိ၊ ရာသီမလာသူတွေကိုပေးတယ်။ အနည်းဆုံး ၈ ပတ်ကြာ ရာသီ ထိန်နေသူကိုသာ ပေးသင့်တယ်။ ၂ ရက်ဆက်သောက်၊ ၃ ရက်ကနေ ၆ ရက်အကြာမှာ သွေးဆင်းမယ်။ တချို့ ၁၅ ရက် နေမှသာ ဆင်းတယ်။
ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲ (ပိန်-ဝ)၊ ဆံပင်ပါး၊ ရင်သားတင်း၊ တချို့သွေးဆင်းများမယ်၊ ဖျားမယ်၊ စိတ်အနေအထားပြောင်းမယ်၊ အအိပ်ပျက်မယ်၊ မွေးလမ်းပိုးဝင်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ရှားပြီးဆိုးဝါးတဲ့မကောင်းကျိုးတွေကတော့ Thrombophlebitis သွေးပြန်ကြောရောင်၊ Arterial thromboembolism သွေးလွှတ်ကြောပိတ်၊ Pulmonary embolism အဆုပ်သွားသွေးကြောပိတ်၊ Myocardial infarction နှလုံးသွေးကြောပိတ်၊ Cerebral hemorrhage ဦးနှောက်သွေးကြောသွေးယို၊ Cerebral thrombosis ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်၊ Hypertension သွေးတိုး၊ Gallbladder disease သည်းခြေအိတ်ရောဂါ၊ Carcinomas အသဲကင်ဆာ၊ Benign liver tumors အသည်းကင်ဆာမဟုတ်တဲ့အကျိတ်တွေ ဖြစ်တတ်တယ်။
သွေးခဲ့တာပြဿနာရှိသူ၊ ဦးနှောက်-သွေးကြောရောဂါရှိသူ၊ ရင်သားကင်ဆာရှိသူ၊ သားအိမ်အတွင်းလွှာကင်ဆာရှိသူ၊ အသည်းကင်ဆာရှိသူ၊ ဘာကြေင့်မှန်းမသိဘဲ သွေးဆင်းနေသူတွေကို မပေးရပါ။ Rifampin, Barbiturates, Phenylbutazone, Phenytoin sodium, Griseofulvin, Corticosteroids, Ampicillin and Tetracyclines ဆေးတွေနဲ့ တွဲပေးတာ သတိထားရတယ်။
၁။ အလင်းပြပေးပါလို့ ရေးတဲ့သူ မနည်းပါ။ မီးပျက်နေသလား စဉ်းစားရတယ်။ အရပ်ဆရာတွေ၊ ဓါတ်ဆရာတွေ၊ မျက်လှည့်ဆရာတွေက သုံးကြတယ်။ စကားထာဝှက်တာမှာလည်း သုံးကြတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ မဆိုင်။
၂။ ကလေးယူနေတာလို့ ရေးသူလည်း အတော်များတယ်။ အရင်က အဲလိုပြောလေ့ ရေးလေ့ မရှိပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး တာဆေး တားနည်းမသုံးသူတိုင်း ကိုယ်ဝန် ကလေးရနိုင်တယ်။ ကလေးယူနေတာလို့ ပြောလိုသာ ကလေးရတာ မဟုတ်ပါ။
၃။ ဖြစ်နေတာကို ဖြစ်တတ်ပါသလား မေးကြတယ်။ နာနေတာကို နာတတ်ပါသလား မေးကြတယ်။ ဘာဖြေရမလဲ မသိ။
၄။ စိုးရိမ်ရပါသလားလည်း မေးကြတာ နေ့တိုင်း။ အန္တရာယ်ရှိပါသလားလည်း မေးကြတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါ ပျောက်ရေး မမေးကြ။
၅။ ဘာတွေထပ်စစ်ရမလဲ။ ဘန်ကောက်သွားစစ်ရမလား မေးကြတယ်။ ရောဂါအမည်သိထားပြီးသူတွေကနေ အဲလိုမေးရင် ဖြေရခက်တယ်။ ရောဂါပျောက်အောင် မမေးကြပါ။ တချို့က စစ်တာနဲ့ ကုသတာ မှားနေကြတယ်။
၆။ အာထွာဆောင်းရိုက်တယ်၊ အကုန်ကောင်းပါတယ်၊ အကျိတ်သေးသေးလေးသာတွေ့တယ်တဲ့။ အဲတာ ရောဂါ၊ အကုန်ကောင်းတာ မဟုတ်ပါ။
၇။ ဘာတွေရှောင်ရမလဲ မေးကြတယ်။ ရောဂါက အစားအသောက်နဲ့ မဆိုင်တာ။ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ ဂေါက်ရောဂါနဲ့ ကိုလက်စထောများသူတွေက ဘာစားရမလဲ၊ ဘာရှောင်ရမလဲ မေးလေ့မရှိကြ။
အညာတခွင် တရားဟောထွက်ခဲ့စဉ်က (ညောင်ကန်အေးဆရာတော်)
အညာတခွင် ခရီးနှင်၍ - တင့်ထွန်း (ချောက်)
အညာတခွင် တေးရေး ရွှေပြည်အေး တေးဆို သန်းသန်းမေ https://www.youtube.com/watch?v=3EqKFtRjNx4
တခွင်ကို တခွင်လို့ မှန်အောင်ရေးတဲ့ခေတ် ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
၁။ လင်ကွန်းခေတ်က one က ခု ထရန့်ခေတ်ထိ one ပဲဆိုတာသိရင် ကောင်းမှာပဲ
၂။ ပုဂံခေတ်က ကီးဘုတ်ဖြစ်မယ်
ကျွန်တော်လည်း ထင်ရှားအောင် တင်စားချက်နဲ့ ရေးလေ့ရှိတယ်။ အစိုးရပြောင်းလို့ သတ်ပုံပြင်တဲ့နိုင်ငံ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် တခုတည်းသာရှိတယ်။
ရွှေဥဒေါင်း ၁၈၈၉ မှာမွေးပြီး ၁၉၇၃ မှာကွယ်လွန်တယ်။ တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များစာအုပ်ကို ၁၉၆၁ မှာ ထုတ်ဝေတယ်။ နဝတ-နအဖ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ စာအုပ်ကိုပြန်ထုတ်တော့ တတွေကို စသတ်ပြင်ထားတယ်။
William Shakespeare ရှိတ်စပီးယား ၁၅၆၄ မှာမွေးပြီး ၁၆၁၆ မှာ ကွယ်လွန်တယ်။ ရှိတ်စပီးယားစာအုပ်တွေကို အခုထိပြန်ထုတ်နေကြတာ သန်းပေါင်းများစွာရှိပြီ။ စပယ်လင် မပြင်ကြပါ။
အစိုးရပြောင်းလို့ သတ်ပုံပြင်တဲ့နိုင်ငံ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် တခုတည်းသာရှိတယ်။
ငုံး အိမ် ကျူ လ သို့၊‎
ငါးဆင့်သမိုင်း။ ။‎ (ဦးပုည)
လောကနယ်တွင် ကတိသစ္စာတည်းသောခါဝယ် သြဇာလေးနက် ပေါ်ဆီတက်၍ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏။
ငုံးမင်း၏ မီးမလောင်သော တော၊
ဃဋိကာရ အိုးထိန်းသည်၏ မိုးမစိုစွပ်သော အိမ်၊
မျောက်မင်း၏ သစ္စာကြောင့် အဆစ်တင်တဲ့ ကျူရိုး၊
ယုံမင်း၏ သစ္စာကြောင့် ယုန်တံဆိတ် ခတ်နှိပ်ထင်ရှားသော လ၊
ဤလေးမျိုတို့မှာ ကမ္ဘာတည်းသ၍ တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သော ကပ္ပဋ္ဌိတိ တရားများဖြစ်လေသည်။
ဦးကောဝိဒ (မြိတ်) ရေးသားတဲ့ တုနှိုင်းမမီစာအုပ်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ထုတ်စာအုပ်တွေမှာ ထပ်(တစ်)ညီ လုပ်ထားကြတယ်။ မလုပ်ကောင်းပါ။ လပေါ်ကအရုပ်ကို နှုတ်ခမ်းမွေးတပ်သလိုပဲ။
ကျူ လ ငုံး အိမ်
ဘုန်းရှိန် ကမ္ဘာတည်။ (ညောင်ကန်ဆရာတော်)
ဒေါင်းယာဉ်ပျံ ဘုံနဘေးမှာ စာရေးလို့ထားချင်တယ်
ဆရာ မလျှော့မတင်း စောင်းကြိုးညှင်းလား၊ မလျော့မတင်း စောင်းကြိုးညင်းလားခင်ဗျ။
စောင်းကြိုးညှိရာတွင် တင်းလွန်းလျှင် စောင်းကြိုးပြတ်တတ်၍ လျော့လွန်းပြန်လျှင်လည်း စောင်းကြိုးချင်း ရစ်ပတ် ရှုပ်ထွေးတတ်သည်။ စောင်ကြိုးကို မလျော့လွန်း မတင်းလွန်း ညှိမှသာ စောင်းသံ သာယာညင်းပျောင်းဖြစ်သည်။
တင်းလွန်လျှင်ပြတ်၊ လျော့လွန်းလျှင်ပတ်။ ရုတ်ချည်းမဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စကို ဇွတ်အတင်းမပြုဘဲ မလျော့မတင်း၊ စောင်းကြိုးညင်းသကဲ့သို့ ပြုကြပါ။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးစတာတွေမှာ တင်းလွန်း လျော့လွန်းလျှင် အကျိုးမထင် ဖြစ်တတ်တယ်။
ခဏခဏ အဲဒါနဲ့ ကိုင်ပေါက်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် သတ်ပုံအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာ လာတယ်။ ခေတ်ကာလအရ ပြောင်းရပါသတဲ့။
မနေ့တနေ့ကမှ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာဖြစ်ကြသူတွေ သူတို့မှန်တယ်ထင်တဲ့ သတ်ပုံနဲ့ရေးကြတာ သိပ်မပြောလိုပါ။ အရင်က အထင်ကရစာအုပ်တွေကို သတ်ပုံပြင်ထုတ်နေကြတာကိုတော့ နာအောင်ပြောချင်တယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ ဖခင်အမည်က ဦးဖိုးခွေးဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။ ခေတ်ကာလအရ ဖခင်အမည်ကို ကွီးလူချောလို့ ပြင်မှာလား။
အခွင့်သင့်တဲ့အခါ ရှင်းပြပေးပါဦး ဆရာ။
ပဌမတောင်ငူအင်ပါယာ (၁၅၁ဝ-၁၅၉၉) နဲ့ ဒုတိယတောင်ငူအင်ပါယာ (ညောင်ရမ်း) ၁၅၉၉-၁၇၅၂) အထိ ရှည်ကြာတယ်။ တောင်ငူမင်းဆက်မှာ တပင်ရွှေထီးနဲ့ ဘုရင့်နောင်တို့က နာမည်ကြီးတယ်။ ၁၂၈၇ ကတည်းက ပျက်သုဉ်းသွားတဲ့ ပုဂံအင်ပါယာကို ပြန်ပြီးစုစည်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ညောင်ရမ်းနဲ့ အနောက်ဖက်လွန်မင်းတွေက ပြန်လည် စုစည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ တောင်ငူအင်ပါယာရဲ့ အထွတ်အထိပ်ကာလမှာ မဏိပူ၊ တရုပ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ရှမ်းဒေသ၊ (ဆိုင်ယမ်) ခေါ် ထိုင်းနဲ့ (လန်ဇန်း) ခေါ် လာအိုတို့လည်းပါတယ်။
၁၄၈ဝ ကတည်းက အင်းဝကျဆင်းလာခဲ့တယ်။ ၁၅၁ဝ မှာ တောင်ငူက လွတ်လပ်ရေးကြေညာတယ်။ ၁၅၂၇ မှာ ရှမ်းတွေက အင်းဝကိုသိမ်းယူလို့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ တောင်ငူမှာခိုလှုံကြရတယ်။ တောင်ငူ-ဟံသာဝတီစစ် (၁၅၃၄-၁၅၄၁) ဖြစ်တယ်။ ၁၅၃၉ မှာ တပင်ရွှေထီးက ပဲခူး (ပဂိုး) မှာ ထီးနန်းပြောင်းစံတယ်။ ပုဂံကို ၁၅၄၄၊ ရခိုင်ကို ၁၅၄၅-၄၇၊ ထိုင်းကို ၁၅၄၇-၄၉ မှာ သိမ်းတယ်။
သူ့နောက်ဆက်ခံတဲ့ ဘုရင့်နောင်က အင်းဝကို ၁၅၅၅ မှာ၊ ရှမ်းကို ၁၅၆၂-၆၃ မှာ၊ ထိုင်းကို ၁၅၆၄-၆၉ မှာ၊ လာအိုကို ၁၅၆၅-၇၄ မှာသိမ်းတယ်။ ဘုရင့်နောင်နတ်ရွာစံတဲ့ ၁၅၈၁ နောက်၊ ၁၅၈၄ မှာ ဆိုင်ယမ် (ထိုင်း) ကပုန်ကန်ပြီး၊ ၁၆ဝ၅ ကတည်းက မြန်မာ့မြေပုံမှာမပါတော့ဘူး။ ၁၅၉၉ မှာ ပေါ်တူဂီတွေအကူအညီနဲ့ ရခိုင်က ပဲခူးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ပေါ်တူဂီလူမျိုး (ဖိလစ် ဒီဘရစ်တို) က သူ့သခင်ရခိုင်တွေကို ပုန်ကန်ပြီး၊ ဂိုအာမှာရှိတဲ့ ပေါ်တူဂီထောက်ခံမှုနဲ့ ၁၆ဝ၃ မှာ သန်လျင်ကို ထူထောင်လိုက်တယ်။ ၁၆၁၃ ဧပြီလမှာ အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားက သန်လျင်ကိုသိမ်းပြီး၊ ဒီဘရစ်တိုကို ကားစင်တင်သုတ်သင်တယ်။ သူ့မဟာမိတ် တောင်ငူဘုရင်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်ဖြစ်သွားတဲ့ (ရတုစာဆို) နတ်ရှင်နောင်ကိုပါ ကွပ်မျက်လိုက်တယ်။
ယိုးဒယား-မြန်မာစစ် (၁၇၆၅-၁၇၆၇) ဟာ မြန်မာ့ကုန်းဘောင်မင်းဆက်နဲ့ (ဆိုင်ယမ်) ယိုးဒယား (ဘန် ဖလူ လောင်) မင်းဆက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ စစ်ပွဲအဆုံးမှာ ရာစု (၄) ခုကြာရှည်ခဲ့တဲ့ (ဆိုင်ယမ်) မင်းဆက်ပျက်သုဉ်းသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဘုရင်ဟာ တရုပ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင်း ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ယူထားတဲနယ်မြေကနေဆုတ်ခွါလာခဲ့ရတယ်။ (ဆိုင်ယမ်) မှာ ကနေ့အထိသက်တမ်းရှည်တဲ့ မင်းဆက် ၁၇၇ဝ ကနေစပြီး ထူထောင်လာနိုင်တယ်။ ဘုရင့်နောက်နတ်ရွာစံပြီး (၁၈) နှစ်အကြာ၊ (၂၆၆) နှစ်တာရှည်ခဲ့တဲ့၊ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ တောင်ငူအင်ပါယာကြီးဟာ ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။
• တောင်ငူအင်ပါယာ အရွယ်သေးကာ မြန်မာဖြစ်လာ၏။
• ဘေးအနားသား အရင်စား၊ အလယ်သားမှာ မှိုတက်လာ၏။
• အလေးချိန်ပါ ပိန်ပိန်လာ၊ အနှစ်အကာ မဖြစ်စလောက်သာကျန်တော့၏။
• အဆီအနှစ်မှာလည်း မြေပေါ်မြေအောက်၊ ရေအောက် ခမ်းခြောက်လာ၏။
• ဂုဏ်အသရေမတိုး ညှိုညှိုးလာ၊ တန်ခိုးတေဇာ ထွန်းတောက်စရာ ဆီမီးလောက်သာကျန်တော့၏။
• စည်းလုံးခွန်အား လုံးပါးပါးလာ၏။
• ပျောက်ချင်စိတ်ရှိက၊ ဆေးနည်းရှိ၏။ ဆေးတဖုံ ငရုတ်ဆုံမှာ နာနာထောင်းဘို့တော့လိုပါ၏။
မြေပုံ တောင်ငူအင်ပါယာ ၁၅၈၀ ခုနှစ်။
လက်နဲ့စာမရေးအားသူတွေ အရုပ်တွေလည်း မပို့ကြစေလိုပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာရှင့် မသိလို့ပါ တောင်းပန်ပါတယ် သမီးက ရိုသေလေးစားလို့ပါ
တနေ့တနေ့ အဲလိုအရုပ်တွေ ဟိုဒ်လုပ်ရာ ၂၀-၃၀ ရှိတယ်။ အချိန်ကုန်တယ်။
တချို့အရုပ်တွေက ငိုတာလား ရယ်တာလား မသိ။ တချို့အရုပ်တွေကို တယောက်လာလည်းဒါ။ ထပ်ချည်းတလဲ။ GIF အရုပ်တွေ အဆိုးဆုံး။
လက်နဲ့ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်ရေးတာက တန်ဖိုးရှိတယ်။ အင်တာနက်လမ်းပေါ်က ကောက်ယူလာတာတွေက ပုတီးကို စက်နဲ့စိပ်သလိုပဲ။
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ နှစ်လမြူ တလမြက်၊ နှစ်လမြက် တစလယ်၊ နှစ်စလယ် တခွက် ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အချိန်တွယ်ကိုလည်း သတိရမိပါ၏ ဆရာရေ။
မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်အတွယ်နည်းကို စပါး၊ ဆန်၊ ပဲ၊ နှမ်းတွေကို ခြင်တယ်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
၂ လမြူ = တလမြက်၊
၂ လမြက် = တစလယ်၊
၂ စလယ် = တခွက်၊
၂ ခွက် = တပြည်
၄ ပြည် = တစိတ်
၈ ပြည် = တခွဲ
၁၆ ပြည် = တတင်း
အမေမှာတဲ့ဆန်တခွဲ သုံးစိတ်နဲ့မလဲ ဆိုစကားရှိတယ်။ ဆန်တခွဲမှာ (၈) ပြည်။ သုံးစိတ်မှာ (၁၂) ပြည်ရှိတယ်။ ခုခေတ်မှာလည်း မှန်ပါတယ်လို့ ဘယ်လိုပြောပြော မှားရေးခိုင်းထားတာကိုသာ အမှန်ယူပြီး ရေးနေကြပါတယ်။